Iyo Inotungamira Inotungamira Kugadzira Mitemo Yengoro Yekutenga muAdobe Commerce (Magento)
Chipiri, February 22, 2022 Chipiri, February 22, 2022 Alex Khvoynitskaya
Kugadzira zvisingaenzaniswi zvekutenga zviitiko ndiyo yekutanga mishoni yechero ecommerce bhizinesi muridzi. Mukutsvaga kuyerera kwakadzikama kwevatengi, vatengesi vanounza mabhenefiti akasiyana-siyana ekutenga, akadai sezvideredzwa uye kukwidziridzwa, kuti kutenga kunyanye kugutsa. Imwe yenzira dzinogoneka dzekuita izvi ndeyekugadzira mitemo yengoro dzekutengesa. Isu takanyora gwara rekugadzira mitemo yengoro dzekutenga muAdobe Commerce (yaimbozivikanwa seMagento) kuti ikubatsire kugadzira yako yekudzikisa system.
Onollo: Yemagariro Media Management yeEcommerce
Chipiri, Gunyana 7, 2021 Chipiri, Gunyana 7, 2021 Douglas Karr
Kambani yangu yanga ichibatsira vatengi vashoma kuita uye kuwedzera kwavo kushambadzira kweShopify mumakore mashoma apfuura. Nekuti Shopify ine yakadai hombe misika mu e-commerce indasitiri, iwe uchaona kuti kune toni yezvigadzirwa zvakasanganiswa izvo zvinoita kuti hupenyu huve nyore kune vatengesi. US social commerce yekutengesa ichakura kupfuura 35% kudarika $ 36 bhiriyoni muna 2021. Insider Intelligence Kukura kwemasocial commerce mubatanidzwa wekubatanidzwa
Moosend: Zvese Zvekushambadzira Zvemagetsi Zvivakwa Kuvaka, Kwayedza, Nzira, uye Kukura Bhizinesi Rako
Chimwe chinhu chinonakidza cheindasitiri yangu ndeyekuenderera mberi kwehunyanzvi uye kudonha kunoshamisa mumutengo wepamusoro-soro wekushambadzira otomatiki mapuratifomu. Iko mabhizinesi akamboshandisa mazana ezviuru zvemadhora (uye achiri kuita) epuratifomu huru… izvozvi mitengo yakadonha zvakanyanya nepo maratidziro achiramba achivandudza. Isu takanga tichangoshanda nekambani yekuzadzisa fashoni kambani yaive yakagadzirira kusaina kondirakiti yepuratifomu yaizovadhurira kudarika hafu yemiriyoni emadhora.
KutumiraZviri nyore: Kutumira Mitengo, Kuchengeta, Kunyora, Mamiriro Ekumisikidzwa, uye Zvidimbu zveEcommerce
Chipiri, January 5, 2021 China, Kukadzi 18, 2021 Douglas Karr
Iko kune toni yekunetseka neecommerce - kubva pakubhadhara kubhadhara, zvigadzirwa, kuzadzikiswa, kuburikidza nekutumira uye kudzoka - izvo makambani mazhinji anozvidza sezvavanotora bhizinesi ravo online. Kutumira, pamwe, chimwe chezvinhu zvakakosha zvekutenga chero pamhepo - kusanganisira mutengo, zuva rekufungidzirwa rekutakura, uye kuteedzera. Zvimwezve zvekubhadhara zvekutakura, mitero, uye mubhadharo zvaive zvine chekuita nehafu yedzese ngoro dzekutengesa dzakasiiwa. Kunonoka kuendesa kwaikonzera 18% yekutenga kwakasiiwa
Omnisend: Iyo Nyore-kushandisa-Platform yeEcommerce Email & SMS Kushambadzira Kushambadzira
Chipiri, Zvita 29, 2020 Chipiri, January 12, 2021 Douglas Karr
Imwe yekufambira mberi kunonakidza mukushambadzira otomatiki gore rino, mumaonero angu, kwave kuri kufambira mberi kwesarudzo dzinodhura dzekushambadzira ecommerce kushambadzira. Chinyakare kushambadzira otomatiki mapuratifomu anofanirwa kuve akabatanidzwa uyezve mushandirapamwe wega wega unogadzirwa nekufamba kwenguva - iko kuiswa kunogona kutora vhiki kana mwedzi usati watanga kuona mari. Zvino, aya mapuratifomu matsva haangogadziri kusangana, ane mishandirapamwe yakagadzirira kutanga nekukurumidza